Puntland oo Hanjabaad adag u diray Ganacsatadda diidan Lacagta Shilinka Soomaaliga ah. – Hornafrik Media Network
Maalmihii u danbeeyey waxaa banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Bosaso iyo Garoowe, waxaana looga soo horjeedaa diidmada lacagta Shiling Soomaaliga ah, kala soocidda iyo in Dollar kaliya wax lagu kala iibsado.
Maanta waxaa xiran qaar kamid ah suuqyada Garoowe sidoo kale waxaa dhibaato ka taagneyd suuqa Xoolaha nool lagu kala iibsado oo ah goobaha ugu badan ee lacagta Soomaaligu ka socon jirtey.
Ganacsatadu waxay diidan tahay in ay qabtaan lacagta Soomaaliga, sababta u weyn ayaa ah in ay dhex gashey lacago kale oo Dowladdu aysan oggoleyn in ay ku qabato canshuurta, taas oo ka timid Koonfurta Soomaaliya, waxaana maamulku ku guuldaraystey in ay ku horjoogsadaan kotroolada Puntland.
Maamulka Gobolka Nugaal ayaa ganacsatada Xoolaha uga digey in ay diidaan lacagta Soomaaliga, Xoghayaha Dowlada hoose Garowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan ayaa sheegay qofkii diida lacagta Soomaaliga in uu yahay al-Shabaab